မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် နိုင်ငံတကာပညာသင်ဆု အခွင့်အလမ်းများ | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Section » Education » မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် နိုင်ငံတကာပညာသင်ဆု အခွင့်အလမ်းများ
မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် နိုင်ငံတကာပညာသင်ဆု အခွင့်အလမ်းများ
နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ပညာသင်ဆုရ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား တွေ့ရစဉ် ဓာတ်ပုံ − Internet
နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဥပဒေ ဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ပညာသင်ဆု
အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှ အပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးသော မဟာဘွဲ့သင်တန်းအတွက် ပညာ သင်ဆုဖြစ်သည်။ အခြားဘာသာ ရပ်များအတွက် လျှောက်ထားခွင့် မရှိဘဲ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အတွက် သာ ပညာသင်ဆုပေးအပ်မည်ဖြစ် သည်။
အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ် တွင် ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာမှ ၂၀၁၉ ဇွန်လအထိ ဖွင့်လှစ်မည့် အချိန် ပိုင်း နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရး ဥပဒေဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့သင်တန်း သို့ တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်အထိ သွားရောက်ရန် မလိုဘဲ အချိန်ပိုင်းသင်တန်းများ ကို မိမိနိုင်ငံမှသာ အွန်လိုင်းမှတစ် ဆင့် တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ နိုင်ငံတိုင်းသို့ ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားခွင့်ပြု ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အရှေ့တောင် အာရှ ၁၀ နိုင်ငံနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ အချို့သာ လျှောက်ထားခွင့်ပြု ထားသည်။ မြန်မာ၊ ဘရူနိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ လာ အို၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ အ နည်းဆုံးဘွဲ့တစ်ခု ရရှိထားပြီး လူ့ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေသတ် မှတ်ချက်များကို စိတ်ဝင်စားသူ များ အဆိုပါမဟာဘွဲ့ ပညာသင် ဆု လျှောက်ထားနိုင်သည်။အရှေ့ တောင်အာရှနိုင်ငံများမှ လျှောက် ထားသူများအနက် နှစ်ဦးကိုသာ ပညာသင်ဆုပေးမည်ဖြစ်သည်။
လျှောက်ထားသူများသည် အနည်းဆုံးဘွဲ့တစ်ခုရရှိရမည် ဖြစ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် စိတ်ဝင်စားမှုအ တိုင်းအတာ၊ လက်ရှိအချိန်အထိ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်များကို ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားရာတွင် ဖော်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ ပညာသင်ဆု ကို http://mentorks.net/2017/12/02/fully-funded-scholarship-masters-inter national-human-rights-law-oxford-university-2၀18/ လင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီနောက်ဆုံး လျှောက်ထားနိုင် သည်။
ပညာသင်ဆုလျှောက်ထား မည့်သူများသည် အောက်စဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်၏ နိုင်ငံတကာ လူ့အ ခွင့်အရေးဥပဒေဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ အချိန်ပိုင်းသင်တန်းကို သီးခြား လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး သင် တန်းဝင်ခွင့်ရမှသာ ပညာသင်ဆု စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား မည်ဖြစ်သည်။
လျှောက်ထားသူ၏ ပညာအ ရည်အချင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးစွမ်း ဆောင်မှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများ ပေါ် မူတည်ပြီး ပညာသင်ဆု စတာလင်ပေါင် ငါးရာမှ ငါးထောင်အထိ ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
အသေးစိတ်ကို http:// ihrlmst.conted.ox.ac.uk/finance/funding/?utm_source=fb&utm_medium= sm&utm_campaign=1711-ip-pgaward1819-ihrlmst တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်လေးခုအတွက် ဘွဲ့ကြိုတန်းပညာသင်ဆု
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ National University of Singapore (NUS),Nanyang Technological University (NTU), Singapore Management University (SMU), Singapore University of Technology and Design (SUTD) တက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်မည့်သူများ Dr. Goh KengSwee (GKS) ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာထားသည်။
အဆိုပါ တက္ကသိုလ်လေးခု တွင် ဘွဲ့ကြိုတန်းတက်ရောက်မည့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသရှိ နိုင်ငံ ၁၅ ခုမှ ကျောင်းသားများအား ပေး အပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံလည်း အကျုံးဝင်သည်။ တက္ကသိုလ်များ သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိရန် မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် သာ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းတက်ရောင်ခွင့်ရရှိသူများ ကိုသာ ပညာသင်ဆု စိစစ်ပေးအပ် မည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းဝင်ခွင့်အ တွက် လျှောက်ထားရမည့် နောက် ဆုံးရက်များမှာ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များက သတ်မှတ်ထားသည့် နေ့ရက်များအတိုင်းသာဖြစ်သည်။ ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားရန် နောက်ဆုံးရက်မှာ ၂၀၁၅ မတ်လ ၁၅ ရက်ဖြစ်သည်။
Dr. Go Keng Swee (GKS) ပညာသင်ဆုသည် Association of Banks in Singapore (ABS) က ပေးအပ်သော ပုဂ္ဂလိက ပညာ သင်ဆုအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။
လျှောက်ထားမည့်သူများ သည် NUS, NTU, SMU, SUTD တို့တွင် ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဘာ သာရပ်များမှလွဲ၍ ဘွဲ့ကြိုဘာသာ ရပ်သင်တန်းတစ်ခုခု ဝင်ခွင့်ရရှိ ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ခေါင်း ဆောင်မှုစွမ်းရည်ကို ပြသနိုင်ရ မည်ဖြစ်ပြီး ပညာရေးမှတ်တမ်း ကောင်းရှိထားရမည်ဖြစ်သည်။ Scholastic Assessment Test (SAT) ရမှတ်တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး SAT ရမှတ်အပေါ် မူတည်ကာ ပညာသင်ဆု စိစစ်ရွေးချယ်မည် ဖြစ်သည်။
ပညာသင်ကာလ အများဆုံး လေးနှစ်အတွင်း ကုန်ကျမည့် ကျောင်းစရိတ်နှင့် အခြားပညာ ရေးဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ အ သွားလေယာဉ်ခ၊ ကျောင်းပြီးပါက မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာမည့် အပြန် လေယာဉ်ခ၊ နှစ်စဉ် ပညာသင်ဆု စင်ကာပူဒေါ်လာ ၆,၅၀၀၊ အ ဆောင်ခများ ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ် သည်။ ပညာသင်ဆုရရှိသူ၏ စင် ကာပူနိုင်ငံတွင် တက်ရောက်နေ စဉ် ပညာရေးမှတ်တမ်း၊ စွမ်း ဆောင်ရည် ကောင်းမွန်မှုတို့အ ပေါ် နှစ်စဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပညာသင်ဆု ဆက်လက်ပေးအပ်သင့်၊ မသင့် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။
ပညာသင်ဆုဖြင့် ဘွဲ့ရပြီးပါ က စင်ကာပူနိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) အမိနိုင်ငံရှိ စင်ကာပူနိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီတွင် သုံးနှစ်အလုပ်လုပ် ကိုင်မည်ဟု ဝန်ခံကတိရေးထိုးရ မည်ဖြစ်သည်။
Dr.Goh Keng Swee(GKS) ပညာသင်ဆုကို http://www. pscgateway.gov.sg/app/gks/account/uidsignin2/ တွင် ဝင် ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ၂၀၁၈ မတ်လ (သို့မဟုတ်) ဧပြီတွင် အွန် လိုင်းမှတစ်ဆင့် အင်တာဗျူးဖြေ ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
ပညာသင်ဆုနှင့်ပတ်သက် ပြီး အသေးစိတ်ကို http://abs. org.sg/dr-goh-keng-swee- scholarship သို့ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှ အမျိုးသမီး များအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ ကြေး
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ များမှ အမျိုးသမီးများအတွက်သာ သီးသန့်ပေးအပ်သည့် Dorothy M.Senesh Graduate Fellowshipအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ နယ်သာလန် နိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံတကာငြိမ်း ချမ်းရေး သုတေသနအဖွဲ့ ဖောင် ဒေးရှင်းက ပေးအပ်သော ပညာ သင်ထောက်ပံ့ကြေးဖြစ်သည်။
Ms.Dorothy Senesh သည် နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားမျှတမှုအတွက် အချိန်ကြာမြင့်စွာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ၎င်းသေဆုံးပြီးနောက် ခင်ပွန်းက ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ကစကာ အဆိုပါ Dorothy M. Senesh Graduate Fellowship အစီအစဉ်ကို တည် ထောင်ခဲ့သည်။
ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ တက် ရောက်နေသည့် မည်သည့်နိုင်ငံ၊ မည်သည့်တက္ကသိုလ်မှ အမျိုးသမီးမဆို အဆိုပါ ပညာသင်ထောက်ပံ့ ကြေး လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ် တစ်နှစ်လျှင် ကန်ဒေါ်လာ ငါးထောင်နှုန်းဖြင့် ၂ နှစ်ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း များအတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေ သူ၊ ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ထား သူများ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး လျှောက်ထားသူ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်အပေါ် မူတည်ကာပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးအတွက်စဉ်းစားပေးမည်ဖြစ်သည်။
ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ကို ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် နောက်ဆုံးလျှောက်ထားနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာကို http://www. scholarships.ng/apply-doro thy-marchus-senesh-fellow ship-women-developing-countries-20182019/ လင့်ခ် တွင် ဖော်ပြထားသည့် အီးမေးလ် လိပ်စာမှတစ်ဆင့် ပေးပို့ရမည်။ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ဘွဲ့လက် မှတ် PDF ဖိုင်၊ ပညာသင်ထောက် ပံ့ကြေး ပေးအပ်သင့်ကြောင်း ထောက်ခံပေးသူ သုံးဦး၏ ထောက်ခံချက် PDF ဖိုင်များ ပူးတွဲတင် ပြရမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ မတ်လ ၁ ရက်တွင် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ရရှိသူ ကို ကြေညာမည်ဖြစ်သည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ National University of Singapore အား တွေ့ရစဉ်
ဓာတ်ပုံ − Internet
‘‘ကလေးဟာ ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေရှိလာဖို့၊ ကိုယ့်အမျိုးဇာတိကိုချစ်တတ်ဖို့ ဒီဘာသာရပ်တွေကတစ်ဆင့် ပျိုးထောင်ပေးနိုင်ပါတယ်’’
ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်များတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့်အတန်းအမည်များ မထည့်တော့